Shirweynaynihi Nabadeynta Beelaha Cagaare oo qodobo lagaso saaray (dhegayso_Sawiro) – Radio Daljir
Shirweynaynihi Nabadeynta Beelaha Cagaare oo qodobo lagaso saaray (dhegayso_Sawiro)
Febraayo 15, 2018 7:43 g 0
Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu soo gabagabeyay Heshiiska labo belood oo dhawaan dagaal kudhex maray howydka gobolada Sool iyo Nugaal ee Puntland.
Shirkan nabadaynta ah oo u dhexeeyey beelaha Bah-ararsame (Dhulbahante) iyo Reer Mahad (Cumar Maxamuud) ayaa ahaa mid labada dhinac si rasmi ah isu hor fariisteen waxaana ay siweyn uga wada xaajoodeen sidii looga gudbilahaa colaadda soo noq noqotay.
QODOBADII KA SOO BAXAY SHIRKA.
1-In labada dhinac ay nabadda wada qaataan
2-In muddo saddex sano ah magta ah lagu bixiyo
3-In sanadka ugu horeeya labixiyo 33
4-Sanadka labaad waxaa la bixinayaa geela lacagta ah ama la qiimeeyey
5-Sanadka ugu dambeeyana la bixiyo inta dhiman.
Kulanka Haweenka – Taxanaha 32aad: Hormarka haweenku waa hormarka dalka (dhegayso)